MUUQAAL: Boqor Buur-madow iyo Cabdi wali Gaas Maxaa kala Qabsaday, Xiisada Puntland iyo S.land (Daawo) | Kalshaale
MUUQAAL: Boqor Buur-madow iyo Cabdi wali Gaas Maxaa kala Qabsaday, Xiisada Puntland iyo S.land (Daawo)
Apr 15, 2018 - 16 Aragtiyood
Boosaso (Kalshaale) Boqor Cismaan (Buur-madow) oo kamid ah isimada dhaqanka Somaliland ayaa ka hadlay Xiisada Puntland iyo Somaliland, Wuxuuna C.wali Gaas iyo Muuse Biixi usoo jeediyey sidii xal loogu heli lahaa coladda kasoo cusbonatay deegaanka Tukaraq.
Aniga horta dadka madaxdhaqanka Caabudwaaq maahi , waxaan jeclaa in Somalida modern society noqdaan oo Madaxweyne iyo parleman doorteen ma talo.
Waxaa taas ka daran xitaa haddii qabiilka hal halnin ma talo oo Isim u yahay waxay ahaan lahayd okay!
Haddii Majeerteen hal nin Isim u yahay, hada Dhulbahante ayaa 13 ka gar qaadan leh, Majeerteen 10 kor u dhaafeen, Isaaq waa la mid!
Sxbkay Dabshid ayaa oran jiray beeldaaqe!! Kkkkkk
Anyway waan soo dhaweyn Beeldaahaje Cali Saleeban oo maanta Carmo lagu caleema saaray! In umadda qayr u horseedo ayaa u rajayn!
Madaxdhaqameedkii iyo culimadii idiinta inflation ayaa ku dhacay oo dadkii caamada ahaa waa wareeriyeen.
Marna waa wada qaxweynayaan marka dadkii ayey hub isugu dhiibayaan.
Saxiib adiga ma taqaanid Xamar, Xalane waa xero millitary xitaa waqtigii Kacaanka. Waa kasii shishaysa Airportiga Mogadishu, meeshaas in ajnimiga degen yihiin waxay calaamad u tahay in Mugadishu Somali xukunto.
Insha Allah Xalane iyadana way ka guurin ajnabi.
Hadda maxaa qortay oo Somalia ku dhaliishay?, waa sida Berbera oo Carab iyo Ethiopian degenyihiin, in ajnabi meelkasta fadhiyaan ogow macal dhul Iidoor, kkkkkkkkkk.
Maanta Puntland waxay eriday Emirares oo Xamar iyo farmaajo ku daba fayleen.
Ilaah baa irsiqa bixiya!
Sharafta iyo Somalinimada iyo in wadan madax banaan nahay ayaa kaweyn.
yaaab ninba lagasheegay managa waalan mise cadanba
laga heesaya buurmadow nin waalan igadheh
isago og inay beeshiisa isaaq kuso duushay dhul aanay lahaynbu
leeyahay nabada halaqaato yaanabada qaata ma ninka
sooduulay mise ninka dhulkisi loguyimi yaab aduunyadu
madaxay ku soconaysa waa yaab waxan maqlijiray gardarow
o eliba gaado kusiidar ninka isaaq e kaso duulay
hargaysa iyo gebilay o jooga dhul aanu lahayn garow shiinyona
kuraba caqliga habarjeclo yaa sidaasa WBT
Yaab, Kalshaale ma aniga keliya ayaa loo daayey!
Aniga waa iska tegey!
Khaatumo la eed! Kkkkk
Awalba Khaatumo waxay ahayd cidla iigu keen Dhuloos, meel ku kala iibin karo oo ku kala qaybin karo dhuloos.
Cidladii waa lagu geystay ee wax iska celi!
Nin magac Khaatumo wata oo Iidoor haysta ka ka qaylin, waa nin indheer garad ahayn.
Hadalada qaar waan ku maadaystaa!
Suldaan Buurnadow waa u gaartay, wuxuu sheegay in Puntland gardaran tahay oo dhulka dadkii lahaa joogaan! Ayaga oo Somalilad ah, taas ma cidbay daah ka saaran tahay!
Waa runtiis Buur madow, hala kala qaado ciidama Dhulbahante oo isku hor fadhiya Tukaraq oo laba calan kala wata.
Kulli waa Dhulbante saraakiil Iidoor iyo Dhabayaco dhagta wax ugu kala sheegayaan.
mardanbe magacayga hasoqorin odayohow xun e nedelka ah
halamash yohow u ciya sida dugaaga e sida kelebka
habar gaalo ah lugta ugaxidhan hebeen iyo maalin
calacalaya baacyohow baacu dhalay kkkkkkkkkk
maadiga afkaga kutaagikara nin darwiish ah duli xoolo ah
Waxaa Kalshaale isoo geliyey Cabaadkaaaga adiga iyo dhowr kale oo Dhuloos ah, adiga dhulkaagii
Cid kula heshiiyey oo gatay Dhabayaco caydaan!
Wax kale Kalshaale uma soo gelin hadaad afka kala baxdaan Majeerteen weligey aniga iyo adigu madoodneen!
Magacayga iidaa waa kaa qaatay lakiiin weli ma gaarin in Kalshaale ka baxo, waayo weli SSDF iyo Bintland iyo niic weli waa lasoo qoraa!
Adiga waa ku daayey, magacaaga waa kuu dayn laakiin Khatumo hanoolato in lagu yiraado iyo Iidoor baa necbahay kala daa! Mise xoolo ayaa tahay!
Khatumo waxaa loo samaystay in duur cidla oo lagugu kufsado lagu geysto! Duurkina waad joogtaa ee iska bixi dhalfada Iidoor ee kugu taagan!
Qofkee ogeyn, Somaliland iyo Puntland oo Hargeysa, Berbera, dekero, airports caalami ah iyo 40 Magaalo haysta iyo Puntland oo Bossaso, Garoowe, Galkacyo, dekedo, airports caalami ah iyo 60 Magaalo haysta ayaa isdeberi kerin ee sidee Buuhoolee iyo Laascanood iyo dhowr tuulo ku socon karaan!
In meel ku darsadaan oo ku tiirsan yihiin waxay ahayd qasab!
Isaaq baa aqli keenay ah= keligiin dowlad samaysta oo runtii ka wadeen cidla iigu soo bax aan idinku kala iibsado!
Maanta waad aragtaa in adeeradaa ku tartamayaan aniga ayaa uga daacadsan Somaliland ama Puntland ama dowladda dhexe!.
Puntland uga dhegtay maamul baan wada dhisanay oo wax wada leenahay! Taas oo wadkeed galay, meel hoo u baahan hadal wax kama taro!
Maanta lagu waashay xoreyn iyo dhulbaa la iga hastaa iyo blahaa blahaa blahaa.
Yaa dhulka haysta, Cali Khaliif, Xaglotoosiye, Koore iyo Camey, Karaash etc.
I hope in Khatumo hanoolato aqriyey waxa aan qoray iyo waxa ula jeedo.
Run sheeg balo/ceeb sheeg!
In meel lagu tiirsanaado aad dhulkaaga ku horumarsato nabadna ku hesho inta qaran laga gaarayo, ka warayso Leelkase oo caawa Galdogob iyo Galkacyo tartamayaan ama Warasangeli oo Baran ka hormari rabto Garoowe, oo caawa Reer Garoowe la leeyahay si Jaamacadda Maakhir u hesho yaan imtixaan lagaa badin!
Ka waran gabar ogeynaysa Garoowe markii loo sheegay in ku jirin ardayda qaadanayso Maakhir University in Baran!
Darbi ahow ama darbi ku tiirsananow, maahmaah reer Xamar!
waxa fiican inuu qofku marku wax qorayo lafahmo ujeedada
u kahadlayo walaahi inaanan waxba uga fahmin waxan
aad so malmaluuqday keliya waxan gartay
inaad ledahay maad nalajogtan maxaad maamul u samaysaten
horta anigu waan kala saaraya dadka shacabka ah
e aanu wada dhalanay dad dhul iyo walaal nimo naga
dhaxayso waxana aaminsanahay inaanaan weligayo
meel kukala tegayn wax kasta o dhaca ceebna igaheli maayaan
waxan kahadlaya doqonkan xun e habarta gaalada ah
lugta uga xidhan sidi kelen dhalay hanala hadlin nijaasyohow
dhareerku ka dareerayo o wuxu kahadlayo iyo wuxu ku hadlayo
midna aan lafahmayn bila xigmada ah inta kabadan
halad kugu khasaarin maayo somaalidu waxay ku maahmaahda
tiisaba daryeela tukale kudara maalintu
dhulbahante maamulka idinla dhastay putlaand waxay
kakobnayd 5 gobol maantana waxa laydinkuso ururiyey
laba gobol bari iyo nugaal sababtuna waa jilic sanaanta adiga o kale hogaanka u hayo
waata gobolka mudug idinko sotaagan laydinka
fara maroojiyey gobolada sool iyo sanaagna
idinkay jabhada SNM idinka fara maroojisay
waayo hadaynu maamul wada samaysanay in lawada difaaco o
cadowga iyo khaayinka lasocda dalka laga wada difacay ahayd
maxaad u cararten ilaa garoowe yaad hader ku canaanan
ma waxaad rabtay inuu dhulkuna maqnaado
magac ahaana lagula joogo garoowe sida ina camay iyo Axmed
adeer ceebtu markay adiga korkaaga tahay haysku dayin
inaad cidkale ku wareejisid mardanbe haka hadlin
deegaankayga iyo dadkayga waxadse tahay xaga dhimirka
waan kufiirsaday marhoraan iska daayey inaan ku jawaabo
o hadal kugu khasaariyo kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
dhalfaad kahadashay dhalfadu miyaanay ahayn tay
habar digir idinkagaso saartay gaalkacayo o idinku kentay
garoowe maad iska siibtid adigu takugu jirtay afarta sano
idinku taagay xasan sheekh kkkk haylaso qaban
hakugu taagnaato ilaa qiyaamaha kkkkkkkkkkkk
ka agbarooro habarta gaalada ah nijaas ilaa nijaas o
sidu khaansiir u cunayey yeeshay caqligi khaansiirka WBT
Ninkan leh 60 magalaan haystaa een hala mashquul magaalop kaliya oo mandheerteen khaatumo u ah noo sheeg op aan lala dagindeling mida kale maxaa ku dhex gelinayaa Isaacs iyo Dhulbahante waa dad is leh adigu abtirsiinta beentaa ah meel ay kasocotoscoop latag
BUUR MADAW NACALAA NACALADII KU DHASHAY KU YAAL WAA NINKA MOORGAN MEEL LA FADHIISTAY
Samawade, kawarran, hadii aan ku dhaho adiga hooyadaa iyo aabahaaba nacalad ayaa kuyaala?
Nijis daanyeer ah oo caabudo qaiilka Isaq ah ayaad tahay. Salaaad kasta oo tukato walaahi wax kajirra malahan. Iga qor, oo waad ogaan Ilaahey marka aad hortagto, maalinta qiyaamaha.b
Horta ninkaan Buurmcadow, boqor maahan, laakiin, dad Isaq, oo qabiilkaada ah qeeybtood ayuu lacag uga dhacaa, uga aruursadaa magaca boqor, si lamid ah magacyada lagu dhacao dadka caqliga xun ee Somalida, sida Islaan, boqor, Ugaas, Nabadoon, Malaaq iyo waxyaabo kale oo dad tuugo ah eey ku dhacaan dadka caqliga xun sidaada oo kale.
Daanyeer najis ah ayaad tahay.
Khaatumo hanoolaato, waan kusalaamay. Walaal u tartiibi land of Punt, oo ah walaalkaa harti, Daarood, oo haku talaxtagin. Haka hadlin qoyskiisa, iyo caruurtiisa, oo uu nooga sheekeeyay si Somalinimo ah, oo walaaltinimo ah. Isaga weerar, ee xaaskiisaka cadaan iyo madow, muslin iyo masiixi, amaba diin la’aan waxeey tahay waqti ha’iskaga dhumin.
Anyway, waan kugu raacsanahay dhagarta eey u dhigeen Majeerteen, walaalahood Dhulbahante, oo mar kasta dagaaladii ahliga iyo qabiilada garab taagnaa Majeerteen, amaba dhisidii maamulka qabiilka ku dhisin ee Puntland, oo ah magac Somaliya oo dhan la dhihi jirray, waagii hora oo eey xadeen Majeerteen.
Sidaas ooy tahay, yaan ka hadlin qoyska qofka meeshaan soo gala, sida xaaskiisa, ee aan ka hadalno caqligiisa iyo meesha uu ka imaanayo isagga.